मायामा शंका जायज़ छ ! | शहरबाट शब्दहरु
« किनारा कहाँ छ ?
आगमनको खबर आयो ! »
मायामा शंका जायज़ छ !	श्रावण ३ जुलाई १९ – सोमबार आठौ दिन
पहिलो ब्रत आज । तिम्रो निकै याद आयो । अनि ब्रत समाप्तिको साँझ तिमीले बनाएको पहेलो दाल भात, फ्राई आलु र एक कटौरा दही । यसको खुब स्वाद उठेको छ मनमा । तिमीले भन्यौं अर्का सोमबार म हुन्छु चिन्ता नगर्नुस । पहिलो ब्रत कटाउनुस् । साँच्चै उनको यो वाक्यबाट दिन कटाए । यो सँगै आज केही सान्दर्भिक कुरा जोड्न मनलाग्यो दैनिकी बिछोडको डायरीमा ।
मैलै जस्तै तिमीले पनि माया लगाई हेर । यो प्रेममय शब्दमा कति अविश्वास भरिएको छ । कारण के पनि हो भने यसबाट एकपक्षिय मायाको सहमति देखिन्छ । अनि म जस्तै माया गर भन्ने आग्रह । तर हाम्रो मायामा यस्ता वाक्यहरु प्रयोग भएका छैनन् । अझ म भन्छु मेरो माया फिक्का छ तिम्रो मायाको अघि । सत्य हो यो । किनभने मायामा शंका हुन्छ । तिम्रो शंका ज्यादा र उच्च छ । म स्विकार्छु मेरो पनि तिमीप्रति शंका छ ।
शंका हुनु अविश्वास भनेर परिभाषित गरिएपनि म त्यसबाट असहमत छु । चोखो मायामा शंका हुनु भनेको अविश्वास होइन । यो प्रकि्रया र चरण हो मायाको सहयात्रामा । यात्रामा कहिकतै अठ्यारा र गलत नजरमा फस्न नसकियोस् भनेर यो जरुरी छ ।
शंकाको कारण विश्वास घट्छ मायामा । प्रत्येक चोटी र पलको शंका जायज हुँदैन । यसले सहयात्रामा सुमधुरता भन्दा पनि असहजताको चुली बढाउँछ । यसकारण यसको डरले गर्दा समाजका प्रेमीप्रेमिकाहरु शंका गरेको कुरा स्विकार्न सक्दैनन् । किनपनि शंकाका कारण अविश्वास उठ्छ र एकाधिकार जीवनको प्रसंग खडा हुन्छ । मुख्य यही हो माया शंका हुनु राम्रो हो । तर अत्याधिकरुपमा शंकाको दरबार बनाउनु हुन्न ।
अनि सँगै आत्मिय भन्दै विश्वासी मित्रको दर्जा दिएर एकआपसको मायामा नारद र विषालु सर्पलाई शीर उठाउन दिनु हुन्न । यसो भयो भने नारद बिलिन हुन्छ र सर्प धरतीमा बिलाउँछ । अनि साक्षी भन्नु दुई आत्मामात्रै । जसले संसार भोग्नुपर्छ । यसर्थ शंका दुईतर्फी हुनुपर्छ ज्यादा शंका भए समाधानमा दुईले साथ दिनुपर्छ । अनि सफल हुन्छ माया र सहयात्रा ।
This entry was posted on जुलाई 20, 2010 at 7:45 बिहान and is filed under म र मेरो कुरा. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.